မနက်တိုင်း MRT နဲ့ လူစည်ကားရာ နေရာတွေမှာ အခမဲ့ ဝေတဲ့ TODAY သတင်းစာပါ နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းလေး သူငယ်ချင်းတွေ ဖတ်ရအောင် ဝေမျှခြင်းပါ။ ခုလက်ရှိ ဖြစ်နေတဲ့ Recession နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ကုမ္ပဏီတွေက အလုပ်သမားတွေ အပေါ် အခွင့်ကောင်းယူ လစာမပေးဘဲ ထားတာတို့၊ အခြား ခံစားခွင့်တွေ မပေးဘဲ ထားတာတို့ကြောင့် စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ တရုတ်ပြည်မက အလုပ်သမား အချို့နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား အလုပ်သမား တချို့ သူတို့ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလုပ်သမားစွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနမှာ သွားရောက် တိုင်တန်း အရေးဆိုကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး TODAY ရဲ့ အာဘော်ပါ။
သတင်းစာကတော့ ၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းစာပါ။ TODAY သတင်းစာကို ဝေတဲ့ အချိန်နဲ့ ကိုယ်မကြုံလို့ မဖတ်ရဘူး ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ စင်္ကာပူရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ သတင်းများ ဖတ်ချင်တဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က သူငယ်ချင်းများ အတွက် todayonline မှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Filed Under : Career, Sharing, Singapore
သတင်းစာထဲမှာ မပါတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းလေးတစ်ပုဒ် ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
http://wwww.yawningbread.org မှာ ဒီခေါင်းစဉ်၂ခုကို ကြည့်ပါ။
Muddy Singapore swallows China workers part 2
သတင်း ထပ်မံ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ Anonymous ခင်ဗျား....
နောက်ထပ် သူငယ်ချင်းများ ဖတ်နိုင်ဖို့ Links တွေက ဒီမှာပါ...
Link : http://www.yawningbread.org/arch_2008/yax-962.htm
Link : http://www.yawningbread.org/arch_2008/yax-965.htm
ကျွန်တော်ကစင်ကာပူသွားဖို့ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ပါ..အစ်ကို blog မှာ ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက်.ကျေးဇူးပါ..နောင်လည်းလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေ အနေလေးတွေကိုတင်ပေးပါအုန်းခင်ဗျာ
up and if I may just I want to counsel you some fascinating issues or tips.
Feel free to visit my webpage: http://www.penpalspoint.com/?L=blogs.blog&article=358541
that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and
Also visit my weblog; http://www.penpalspoint.com
something from their store. I’d prefer to make
Feel free to surf to my web blog - http://Digitalxportal.net/
Havealook at my page - creativus.lv
My website :: http://clickbank-tribune.com/index.php?do=/blog/116495/the-last-king-of-spain/